Kolontsaina malagasy: ny fandrosoana tsy hoenti-manary ny fototra | NewsMada
Kolontsaina malagasy: ny fandrosoana tsy hoenti-manary ny fototra
Par Taratra sur 07/07/2020
Mandroso, hono, ny kolontsaina malagasy ! Mivoatra, hono, ny mpanakanto ankehitriny! Manana saina tia karokaroka, hono, ny mpikirakira ny kanto eto Madagasikara! Sns. Mety ho marina ihany ireo raha…
… Jerena amin’ny voka-kanto mifanaretsaka etsy sy eroa, maharaka fandrosoana ny zavakanto malagasy. Rehefa mety ho zavakanto, toa ahitana io tranga io avokoa. Ny kabary, efa ahenoina “teny hafahafa”. Ny hira, andrenesana izany ihany koa. Ny dihy, efa maro amin’ireo miseho any ivelany no hain’ny Malagasy, sns. Ny endrika tahaka izany ve no atao hoe fandrosoana eo amin’ny tontolon’ny zavakanto ao amin’ny firenena iray? Fa angaha rehefa tsy mampiasa na mindrana ny an’ny hafa avy any ivelany dia lazaina fa tsy mandroso? Fisaina toa mametraka avy hatrany fa tratra aoriana hatrany ny Malagasy raha oharina amin’ny vahiny!
Raha kolontsaina manokana, mety ho sarotra ny tena hamaritana azy io hoe mandroso na tsia. Singa marobe mantsy no ilaina fa tsy zavatra tokana. Raha eo amin’ny lafiny hira, ohatra, tsy ny fampiasana ny fitaovana mandeha amin’ny herinaratra akory dia ampy ilazana fa madroso ny mpihira na ny tarika iray. Tahaka izany koa, tsy ny fanaovana sary hosodoko miboridana akory dia ilazana fa efa manana toe-tsaina mivoatra sy mandroso ny mpanao hosodoko iray. Toraka izany ihany koa ny kolontsaina sy ny zavakanto hafa.
Raha very vokatry ny tefy maika sy ny hala-tahaka ary ny “mitafy lamba eo imason’ny tompony”, ny fototra, tsy azo lazaina fa mandroso ny kolontsaina malagasy. Io fototra io no mila hasongadina satria io no harena sy mampiavaka ilay kolontsaina. “Ny fisongadinan’ny fototra arahin’ny fivelarana miampy fahaiza-mampifandray izany amin’ny vanim-potoana sy ny zava-misy no fandrosoana raha ho an’ny kolontsaina sy ny zavakanto”, hoy ny voarakitra ao anatin’ny boky “Valihan’Ikaky”, nivoaka ny taona 2018.
Hatreto anefa, ny fanariana ny an’ny tena sy fankamamiana ny an’ny hafa no heverin’ny sasany ho fandrosoana. Raha io no mbola mitoetra, “handroso ho any amin’ny fihemorana ny kolontsaina sy ny zavakanto malagasy”!